Mini Militia - Doodle Army2Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Mini ကိုပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင် - Doodle ကြည်းတပ် 2
Mini ကိုပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင် - Doodle ကြည်းတပ်2APK ကို
6 အွန်လိုင်းကစားသမားသို့မဟုတ် 12 အထိဒေသခံ Wi-Fi ကို အသုံးပြု. နှင့်အတူအတွေ့အကြုံကိုပြင်းထန်သော multiplayer တိုက်ခိုက်ရေး။ အဆိုပါ Sarge နှင့်အတူရထားနှင့်အော့ဖ်လိုင်းသင်တန်း, Co-op နဲ့ Survival Modes သာ၌သင်တို့၏ကျွမ်းကျင်မှုကိုသှေး။ အဆိုပါစနိုက်ပါ, ShotGun နှင့် flamethrower အပါအဝင်လက်နက်အမျိုးအစားများကိုများစွာသောလူ shoot ။
ပေါက်ကွဲအွန်လိုင်းနှင့်ဒေသခံ multiplayer စစ်ဆင်ရေး Features! အလိုလို dual-ချောင်းကိုပစ်ခတ်မှုထိန်းချုပ်မှု။ ပွင့်လင်းကမ္ဘာကြီးတိုးချဲ့ဒေါင်လိုက်လေယာဉ်ခရီးစဉ်များအတွက်ဒုံးပျံဘွတ်ဖိနပ်အသုံးချဖို့မြေပုံ။ zoom ထိန်းချုပ်မှု, Mele တိုက်ခိုက်မှုများနှင့်ခေတ်မီခြင်းနှင့်အနာဂတ်မိုးသည်းထန်စွာတာဝန်လက်နက်နှင့်လက်ပစ်ဗုံးနှင့်အတူ dual-ကိုင်စွဲစွမ်းရည်။ Soldat နှင့် Halo အကြားကဒီပျော်စရာကာတွန်းရေးရာလက်ဝါးကပ်တိုင်အသင်းကိုအခြေခံပြီးတိုက်ပွဲများ Play ။
Mini ကိုပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင် - Doodle ကြည်းတပ်2ခေါ် DA2, မူရင်း stickman သေနတ်သမား Doodle တပ်မတော်အပေါ်အခြေခံပြီး, ကစားသမားတုံ့ပြန်ချက်များနှင့်အကြံပြုချက်များအပေါ်အခြေခံပြီးဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏အကြံဥာဏ်များကိုနားထောငျဖို့ခစျြဒါကြောင့်သင်ကျေးဇူးတင်နှင့်လာမယ့်သူတို့ကိုစောင့်! အဆိုပါ In-ဂိမ်းကိုအီးမေးလ် link ကိုထံမှ Sarge မှဖုန်းခေါ်ထွက် Give!
dual-ကိုင်စွဲနိုင်စွမ်း, ထိုကဲ့သို့သောဒုံးပျံ launcher အဖြစ်အပိုကိုယ်ပွားစိတ်ကြိုက်ပစ္စည်းများကိုနှင့်အွန်လိုင်းလက်နက်များ, လက်ဖြောင့်ရိုင်ဖယ်, လေဆာရောင်ခြည်မှအပြည့်အဝဝင်ရောက်ခွင့်ရရန် Pro ကို Player ကို Pack ကိုဝယ်ယူရန်, သေနတ်မြင်ပိုပြီး!
Mini ကိုပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင် - Doodle ကြည်းတပ် 2
50.29 ကို MB
Mini ကိုပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင် Mod ...
စားပွဲတင်တင်းနစ် Touch ကို
Justin Alonso says:
ဇူလိုင်လ 9, 2019 မှာ 12: 57 ညနေ